Dowladaha Ugandha iyo Itoobiya oo durba bilaabay dagaalka ay ku hayaan Madaxweyne Farmaajo | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Dowladaha Ugandha iyo Itoobiya oo durba bilaabay dagaalka ay ku hayaan Madaxweyne...
Dowladaha Ugandha iyo Itoobiya oo durba bilaabay dagaalka ay ku hayaan Madaxweyne Farmaajo
Maalinta berri oo Arbaco ah ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho ka dhacdo xafladda caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Haddaba waxaa jiraan dowlado badan oo kasoo qeybgeli doono xafladaas sidoo kalana waxaa jiro dowlado ku gacan seeray inay muqdisho imaadaan.
Waxaa Socada Diyaargarowgii ugu danbeeyay ee qabanqaabada xafladda ayaa galaya saacadihii ugu danbeeyay, waxaana la sheegay inay kasoo qeyb geli doonaan madax sare oo Geeska Afrika iyo Aasiya kasocota.
Sidoo kale Madaxda kasoo qeybgeleyso ayaa kala ah Madaxweynayaasha dalalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Kenya Uhuru Kenyatta, waxaa kaloo la filayaa inay kasoo qeyb galaan wasiirada arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Kuweyd.
Hadaba Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa ka baaqsaday xafladda caleemasaarka madaxweyne Farmaajo, isagoo hore uga qeyb galay caleemasaarkii madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh. Waxaa kaloo shaki ku jiraa madaxweynaha Uganda Yoweri Musaveni oo ka mid ahaa madaxda Muqdisho timid dhowr jeer.
Labadan dowladood ayaa lagu tiriyaa inay kamid yihiin dowladaha sida weyn u mucaaradsan siyaasadda madaxweyne Farmaajo, sababtoo ah haddii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la qalabeeyo waxay keeneysaa inay ciidamada Ugandha isaga baxaan dalka waana mid aysan rabin inay dhacdo, halka Itoobiya ay iyadana Soomaaliya ka rabto inay si xoog ah uga qaadato dhul badan.
Go’aanka ay labadaan mas’uul ku diideen xafladaan ayaa lagu tilmaamay inay tahay siyaasad ku dhisan mucaarad iyo dagaal maadaama aysan meesha ka muuqan cudur daar rasmi ah oo ay soo bandhigeyn.
Sidoo kale waxaa la filayaa inay xafladaan kasoo qeyb gasho dowladda Turkiga, waxaana meteli doono wafdi ka imaanaya dalkaasi oo aan weli la shaacin heerkiisa, halka Midowga Afrika, IGAD iyo Midowga Yurub ay u meteli doonaan madax sare oo ka tirsan ururadaasi.
Previous articleMeydadka 87 Qof oo laga Helay Xeebaha Dalka Yeman Xilli ay Tahriib ahaayeen
Next articleXOG+SAWIRRO: Mowshin culus oo laga keenay Madaxweyne Cosoble iyo Wasiiro iscasilay, Waa Maxay Sababta?